Nezvedu - Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd.
Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd, iri nyanzvi welded waya pajira riya uye chikuva grilles zvigadzirwa fekitori kubva 1997. Fekitori inogamuchirwa ne ISO 9001-2008. Makore gumi achibuditsa zviitiko nezvakanaka zvekutengesa masevhisi.Tine vashandi vanosvika mazana maviri nemaviri mukambani, simbi yekukanda yekuisa muchina mutsara, otomatiki waya mesh yekutengesa mutsara, muchina wekucheka, muchina wekukotamisa, muchina wekuparadza, muchina wekubaya, muchina wekuumburuka uye unoita robhoti kutenderera.
"Chigadzirwa chemhando yepamusoro, pane nguva yekuendesa uye kugutsikana mushure-kutengesa masevhisi" ibhizinesi redu reuzivi.
"Gadzira kukosha mukufara" itsika yekambani yedu.
"Kuderedza hurombo uye kuita hupenyu hwevanhu vese" iri basa redu.
● 1997 Yakatangwa (Weijia Metal Mesh Factory).
● 2008 Iva nehutano hwekupinza uye kutumira kunze (Hebei Weijia Metal Mesh Co., Ltd).
● 2012 Tora ISO 9001 certification.
● 2015 Yepamberi yekugadzira michina uye yakamisikidzwa fekitori nyowani inoshandiswa.
● 2017 Akatanga kucherechedza rubatsiro, kupa michero yemiti yemichero, yenguruve, nezvimwewo kunzvimbo dzehurombo.
● 2019 Pedzisa iyo yekugovana system shanduko.
● 2020 Yakapedzwa yepamusoro-tech bhizinesi certification.
* Chigadzirwa nemutengo wefekitori wakapihwa.
* Yakanaka mhando ine ISO 9001 chitupa kubvira gore ra1997.
* Professional timu yekutengesa uye nekukurumidza inopindura mutengi mukati maawa gumi nemaviri.
* Zvigadzirwa zvinogona kugadzirwa.
* Mutengi logo pane zvigadzirwa zvinogamuchirwa.
Kubva 1997, Isu tinotanga bhizinesi rekugadzira simbi nesefa, frp nesefa uye welded simbi fenzi yekuvaka uye kuvaka mapurojekiti. Tarisa pane zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nenguva yekuendesa, isu takawana akawanda kukudzwa, se "Kuvimbika Enterprise", "Yakanaka Fekitori", uye isu tiri Mutevedzeri weMutungamiri we "Anping County Wire Mesh Chamber of Commerce".
Kambani yedu inotenda kuti vashandi ipfuma inokosha yekambani, uye inonamira kukoshesa kubatana kwevashandi, kuvandudza hutano hwavo hwepfungwa, uye nekuvandudza kwehunyanzvi hunyanzvi. Uye kuronga makambani mazhinji emakambani ekuvaka, yemunhu hobby kusimudzira musangano wekutsinhana, uye nekuchengeta nhengo dzemhuri dzevashandi